Ngubani Nikita Alekseev (Alekseev)? Wenza ntoni? Mdala kangakanani | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Ngubani Nikita Alekseev (Alekseev)? Wenza ntoni? Mdala kangakanani
U-Nikita Alekseev yimbaleki yase-Ukraine, owazalwa ngo-1993 kwisixeko saseKiev. Namhlanje, uNikita uneminyaka engama-22 ubudala, kodwa sele eyimvumi ephumeleleyo, emamelwe ngamawaka abathandi bomculo. Abanye babathandi bomculo, uNikita Alekseev waziwa ngokuba nguAlekseev. Ingoma yakhe ethi;; iDrunken Sunquot; -Okubetha ngokwenene ukuba bobabini abantu abadala kunye nabantwana bamamele. U-Nikita ulilungu leprojekthi yase-Ukraine; I-Voice of the landquot ;. Ngokubanzi, umlingisi onetalente kwaye nganye yeengoma zakhe zincinci.
Nikita Alekseev Uzalelwe kwikomkhulu laseUkraine, eKiev. Ngomhla we-18 kaMeyi.
Xa wayeneminyaka emithandathu ezelwe, wemka eKiev waya kuhlala eChita nabazali bakhe, kodwa olu sapho luhlala apho iminyaka emibini kuphela kwaye babuyela kwilizwe labo.
Ke okwangoku eli bhululo lihlala eKiev.
UNikita wayenobomi obonwabisayo ebuntwaneni. Zonke izihlobo zakhe zihlala naye kwisixeko esinye, uthando lwakhe lokuqala lwenzeka apho. Abazali bakhe ngoogqirha. Kwakungekho zimvumi kusapho.
Umculo wangena ebomini bakhe xa lo mfo wayeneminyaka elishumi kuphela ubudala. Utitshala wakhe yayinguKonstantin Pona. Indoda le imfundise ukuziva kwaye ayiqonde le ngoma, kwaye yaqinisa uthando olungenamda kumculo odibeneyo.
Ndikhumbula xa ndandineminyaka eli-12 ndinentsebenzo esikolweni, ndacula iculo elithi Singabanqobi bakaKumkanikazi. Umama ke wandinika ibhulukhwe emhlophe qhwa, ibhulukhwe entle kakhulu, ngakumbi lo msebenzi, kwaye ekugqibeleni kokusebenza kwam ndakhwela emadolweni ukuya ngaphambili kwinqanaba. Ewe kunjalo, umphezulu weparadesi kwinqanaba wawuse-mastic, njengoko kuhlala kunjalo ezikolweni. Yindlela endizinxiba ngayo iibhulukhwe ezimnandi okwesihlandlo sokuqala nesokugqibela.
Emva kokuphumelela esikolweni, uNikita wangena eyunivesithi kwisebe lezentengiso. Ngasihlandlo sithile, kwabonakala kumfo ukuba le yayi kubizwa kwakhe, ngeloxesha wayenethuba lokungazithembi, wayeka ukukholelwa kuye, kwitalente yakhe. Nangona wayekuqonda kakuhle ukuba iisemina zeshishini lentengiso azange zimzisele ulonwabo. Kodwa ngokuziqhelanisa nokuhlwa neqela, wabaleka weqa.
Ngeli xesha, yena nabahlobo bakhe babumba iqela lamaMova. Kuyo, wabhala yedwa wabhala umculo.
KuNikita, abahlobo bakhe kunye nosapho yindawo yokuhlala, ngaphandle kwayo akunakwenzeka ukuba ube ngumntu opheleleyo. Le yinkxaso, ukusondelana ngokomoya, impendulo efanelekileyo kwimibuzo ephambili ebomini, uthando olungenamda. Ndiyambulela uThixo ngokusondela kum, ukuba bekungenjalo ngenxa yabo, ngebungekho.
Phambi kwelizwi lakhe, phantse akazange azame ukuba sisodwa. Nyana omncinci
Ndizamile ithamsanqa yam kwiJunior Eurovision Song Contest, kodwa ndaphumelela.
Kwaye nantsi amava okuqala okwenyani. Ukuthatha inxaxheba kumboniso weLizwe. Ixesha lesine ngo-4.
Kwindawo yokusebenza, ngu-Ani Lorak kuphela oguqukele kumfana ovela kuwo onke amalungu ejaji. Uye wafika kwiqela lakhe. I-Ani xa ichukumisa iqhosha igqiba ikamva lomntu.
Ngokuzithemba ngokudlula kwinqanaba leBattle, uNikita Alekseev wangena kumjikelo weKnockout kwaye waya bukhoma ngengoma kaSvyatoslav Vakarchuk. Wayenethamsanqa lokuthetha kusasazo lokuqala.
Xa uNikita engazange aqhubekele phambili, uAni wagqiba kwelokuba avuze inxaxheba ayithandayo, wamnceda ukuba apapashe ividiyo.
Ke kwabakho iklip yevidiyo iDrunken iLanga, eyathi kwangoko yabetha.
Ingoma yayinesiprofetho. Wahamba kuhambo oluya e-Spain kunye nentombi yakhe. Apho baphupha ngokuthandana. Endaweni yoko, kwaqhawuka umtshato, uNikita wafunga esithi uza kuyenza le ngoma ukuze azisole ngayo. Xa urekhoda le ngoma, wabeka iimvakalelo zakhe kunye neemvakalelo kuwo onke amagama. Kwaye abaphulaphuli bayiva.
UNikita uvumile ukuba kutshanje udibene nomtshakazi, kodwa umhla wabo wawukwinqanaba elilandelayo kukwahlukana okokugqibela.
Kutshanje, intombi ebikade iyintombazana indibizile kwaye yacela intlanganiso. Ndafika, ndithenge iintyatyambo. Siye saya kwindawo yokutyela kwiibhanki zeDnieper. Kwaye kwenzeka ukuba ngalo mzuzu nje ilanga litshone emva kwam. Ubuso bakhe babukhanye ngovuyo. Kodwa, ngelishwa, ndisiva ubushushu kuphela ukusuka ngasemva, apho lalikhona ilanga, kwaye ingekuko kulowo uhleli ngakwelinye icala ... Yayiyenye intle, imvumi yatsho njalo.
Ngaphandle kwayo yonke into, uNikita uqinisekile ukuba ulonwabo lokwenene lumlindele ngaphambili. Nje ukuba ndidibane nomntu onokuthi aqonde kwaye andixhase, utshilo umzobi.
Njengomntwana, bendinothando olunzulu nomlingisi uShannin Sossamon. Wayengowam ngokupheleleyo. Ngokuphathelele ekubeni fan inokuba yintombi yam, kunzima kum ukuba ndicinge ukuba ndisecaleni komntu ongalithandiyo ilizwi lam okanye iingoma zam, kuba umculo yintsingiselo yam!
Ikliphu yadutyulwa eKiev. Okokuqala, kwindawo evulekileyo kufutshane noLwandle lwaseKiev, emva koko kwizindlu ezivaliweyo ezibini. Kuya kufanelekile ukuqaphela ukuba iqela lenze konke okusemandleni alo, nangona kunjalo, njengeqela lonke lesikhokelo, likhokelwa nguAlan Badoev, oqulunqe iyelenqe lomsebenzi wevidiyo. Ilanga elinxilayo malunga nokwahlukana, malunga nexesha lokuphela kwamagama kwaye akukho mandla okuqhubeka.
UNikita uthetha ngexesha lakhe elikhulu kwindinyana.
Ndiyazithanda iimovie, ndiyakuthanda ukufunda, ndiyakuthanda ukuphumla kunye nomphefumlo wam.
Ndiyayithanda ibhola. Ndiyakuthanda ukufaka amanqaku. Ewe, ndizama ukubaleka ndiye kusapho nabahlobo.
Ngoku uNikita usebenza nabavelisi ababini. Umlawuli wenqanaba lokuboniswa okukhulu kwe-Oleg Bodnarchuk kunye nomvelisi womculo, umqambi odumileyo uRuslan Quinta.
Ngoku lo mfo uhamba yedwa, isiqingatha sesibini besingenalo ixesha lokufumana. Umsebenzi uthatha lonke ixesha. Ngaphezu koko, ngoku uxakekile ubhala i-albhamu.
Ukongeza, ungumfundi wasimahla weZiko leNkcubeko lasePoplavsky, uqeqeshiwe kwiziseko zomsebenzi wesikhokelo, ukubamba, ukuhamba kwinqanaba, intetho yamanqanaba.
UPhilip Kirkorov uthetha kakhulu ngobuchule bakhe bokuyila. Wabona italente yakhe kwaye uyamncoma kakhulu.
Ngelixa ndibukele umculo omtsha woNyaka kunye neeKrisimesi ezivela eUkraine apha ekhefini, ndabona inombolo eyenziwe ngumculi omtsha kwenye yeendlela zikamabonwakude, endingakhange ndibone okanye ndeva ngaphambili! Ngokombono wam lo unesiphiwo kwaye akaqhelekanga!
Ndiqinisekile kwaye andithandabuzi ukuba, ukuba yonke into ihamba ngokwendlela echanekileyo kunye nempumelelo, kungekudala siza kubona ukubonakala kwenkanyezi enkulu! Kodwa yonke into isezandleni zikaThixo, kwaye, ewe, abaphulaphuli! Emva konyaka ubukhulu becala, akazukusondela kuye! Ngubani owaziyo, ukuba andiphazami ngalonto! watsho uFilipu.
Ujoyine uluvo lukaKirkorov nehlakani lakhe, imvumi uGlucose. Umculi uqaphele nedatha yezwi kaNikita kunye neengoma zakhe.
Namhlanje ndimamele iingoma ezintsha zika-Alekseev! Kwaye wonke umntu olinde ezi ndlela zinethamsanqa! Zipholile kakhulu! Silinde iNkulumbuso, imvumi ibhale.
Lo mfo uthetha ngaye ukuba unazo zozibini izandla zayo yonke into eyenzekayo kwinqanaba.
Umntu unokuthi amnqwenelele ithamsanqa.
U-Nikita Alekseev ngumdlali omncinci, owaziwa e-Ukraine kwaye ngoku ukuthandwa kwakhe kuyakhula eRussia. Kwaye yena uvela eUkraine, kodwa naseRussia, waziwa kakhulu kwingoma ethi "Drunken Sun".
Mncinci kakhulu, umhla wokuzalwa ngo-18.05.93/23/XNUMX, oko kukuthi, ngentwasahlobo uza kuba neminyaka engama-XNUMX ubudala. Wazalelwa eKiev, kodwa de kwaba yiminyaka emibini yena nosapho bakhe bahlala kwidolophu yaseChita, iChita, emva koko babuyela eKiev.
Uthathe inxaxheba kwi-Quote ye-Ukraine; apho wafikelela khona kowokugqibela.
U-Nikita Alekseev utsala umdla wabantu abaninzi emva kokuthatha inxaxheba kumdlalo we-Qu; Voice of Krajina; Kwisitishi 1 + 1 (eUkraine).
Kwaye ingoma yakhe ethi; twist kwi-quot; iRadioquot yaseRussia; kaninzi ngemini.
UPhilip Kirkorov uxela ikamva eliqaqambileyo labadlali abaselula abaneminyaka engama-20 ubudala. U-Irina Bilyk wambiza "ngokufunyanwa konyaka".
UNikita Alekseev oneminyaka engama-22 ubudala, odlala phantsi kuka-Alekseev, uyathandwa kakhulu kukubonga igama elithi "Drunken Sun", nelitshisa iitshathi zomculo.
U-Nikita wazalwa nge-XNUMX kaMeyi kwidolophu elikhulukazi yase-Ukraine, eyiKiev.
Kuqatshelwe uNikita ngexesha lesine lomdlalo we-Qu; Ilizwi le-landquot; eUkraine.
Indlela uNikita agqibe kwelokuba ayiphuhlise kwaye ayishukume yeyokhetho lobuqu, kuba izalamane zakhe zisebenza kwezamayeza.
Ngo-2016, u-Alekseev wakhupha i-albhamu ebizwa ngokuba yi-Qu; Gcina Quot ;.
U-Nikita uthetha ngomculo wakhe ngendlela yokuba zonke iingoma zitshawa ezahlukileyo, kwaye yonke le nto uyayithetha kwaye uyachaza ukuba unabalandeli abaninzi kunye nabathandwayo.
UNikita Alekseev uneminyaka engamashumi amabini kuphela ubudala. Kwaye uvela eUkraine kwaye idolophu yakhe yiKiev.
Unokubizwa ngendlela yesiNgesi kwinetha, kwaye ngu-Alekseev. Ngaphambili, wayengumntu okhuphisana kunye nabathathi-nxaxheba kwinguqulelo yeUkraine kumdlalo wezwi. Ubhala iingoma zakhe azenzele ezakhe iingoma.
Kwaye unayo yonke into ephambili, umculo omnandi kunye nobuchule bokuyila, kwaye uyabathanda abantu abancinci.Wabhala ingoma ebizwa ngokuba yiDrunken iLanga waxelela ukuba zonke izigigaba zeculo zenzeka kuye.
U-Nikita Alekseev, owaziwa ngcono phantsi kwepseudonym Alekseev, ungowokugqibela kumdlalo we-Voice (e-Ukraine). Lo mfo uselula uza kuba neminyaka engama-23 ubudala (nge-18 kaMeyi), ngoku uneminyaka engama-22 (wazalwa ngo-1993). Nguye ngokwakhe uvela kwidolophu enkulu yaseUkraine-isixeko saseKiev (wazalelwa apha kwaye uhlala ngelo xesha).
Ngoku lo mfo ufunda eyunivesithi, ugqirha kwezentengiso. Kuncinci okwaziwayo ngobomi bakhe bobuqu, kodwa yena ubanga ukuba akakalifumani iqabane lakhe lomphefumlo. Ngexesha lakhe elikhululekileyo, uNikita, ewe, uyacula, uyakuthanda nebhola, ukufunda iincwadi nokubukela imovie.
Ngoku u-Alekseev uthandwa ngokukhawuleza. Ndicinga ukuba oku akunxibanga kuphela ngezakhono ezibalaseleyo zelizwi kunye nobuthathaka, umculo wokwenene, kodwa kunye nendlela engaqhelekanga kakhulu kule. Wonke umntu sele ediniwe ngeengoma ezifanayo, nokuba ziculwe kakuhle, kwaye uNikita wakwazi ukuzisa uhlobo oluthile lwe-zest emmisa ngokwahlukileyo kwabanye abaculi.
U-Nikita Alekseev ngumculi oselula oneminyaka engama-20 ovela kwiqela lika-Ani Lorak. Ungumdlali ophumeleleyo kumdlalo weVidiyo; Izwi leKranes-4quot ;.
UPhilip Kirkorov wamthanda uNikita, kwaye uPhilip wagqiba ekubeni ancede lo mfo ukuba angcono.
UPhilip ubona kwangaphambili kuNikita inkanyezi enkulu yeshishini lokubonisa.
Ukufunyanwa komculo walo nyaka kwabizwa ngokuba nguNikita no-Irina Bilyk.
Umntu odumileyo wazisa ingoma kwintsebenzo yakhe ethi;; Drunken Sunquot ;. Ividiyo yengoma yadutyulwa nguAlan Badoev owaziwayo, kwaye-mahala.
Ingoma yafumana ukuthandwa hayi eUkraine kuphela, kodwa naseRussia.
U-Nikita ogama lingu-Alekseev yimvumi ye-novice, oko kukuthi, umfana oselula wenza umsebenzi wokucula.
UngowaseUkraine, uhlala eKiev, kodwa waduma ngenxa yengoma ebizwa ngokuba yi-quot; Drunken Sunquot ;.
UNikita uzakuba namashumi amabini anesithathu eminyaka ngo-2016, wazalwa ngonyaka ka-1993 ngomhla weshumi elinesibhozo ku-Meyi.
Udlale umculo ukusukela iminyaka elishumi.
Wayelilungu lenkqubo yomculo waseUkraine ebizwa ngokuba yi- "quot; Ilizwi lelizwe"; Oko kukuthi, i-analogue yeRussian "quot; Voices"; -kule projekti ifikelele kumjikelo wokugqibela, kodwa awuzange ube yimpumelelo.
Kuyaziwa ngobomi bakhe bobuqu ukuba ukuza kuthi ga ngoku ukhululekile kubudlelwane, kodwa ngaphambi koko wayenothando olude.
Lo mculi uxelwa kwangaphambili ngomsebenzi oqaqambileyo kunye nokuthandwa.
Kwitshathi ezininzi ze-Muz-tv, i-ALEKSEEV ibambe isikhundla esiphambili ngengoma ebizwa ngokuba yi "Drunken Sun". Ngapha koko, lo mfo unamagama amahle anelizwi Nikita Alekseev.
UNikita oneminyaka engamashumi amabini ananye wayengumgqatso wokugqibela; Ilizwi lelizwe. I-Reboot .quot;, apho umcebisi wayeyimvumi uAni Lorak. Ngenxa yoko, umsebenzi wakhe wokucula unyukele kwinqanaba eliphezulu. Uvela kwisixeko saseKiev (eUkraine).
Le mvumi yade yafumana ukohlukana nentombi yayo, eyayichasene nokuduma kwayo.
Imibuzo ye-20 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,442.